Waxaan ahaayeen waqti-dhiman degan Holm | Holmbygden.se
– Waxaan ku noolnahay ee bartamaha Stockholm, laba blocks ka Stureplansgruppen, wayna soo basaaseen
wadarta la barbardhigo. Waxaa la helay Holmsjön, i Vike. Norrland
gudaha, degaanka miyiga dabeecadda ahaayeen xiisootay. Hadaf kale oo ahayd
Si aad u hesho guri gaboobay oo aan ahaa “probes dayactiray” laakiin si
xaalad asalka ah sida ugu macquulsan.
– aragga waxay ahayd in nabad la helo, si fiican ugu fariisan suuqa kala aamusnaanta guud,eegaan cawska, shishadiisa, kaynta ku yaal. waxaa
dhawaaqa oo keliya waa saacad awoowe u sax. xiisootay A nostalgic waxa awowayaashayo lahaa marka ugu noolaa baadiyaha is-cuntada.
– Waxaan helay träpatrongården hore Cafiyi beerihii rogid in Lake Holm iyo Church Holm ayaa. Large waa glazed ah
balbaladood, fasaxa, edegga, Tababaraha kooxda, woodshed, härbre, Abuuran mm. dhulka kaynta Qaar ka mid ah oo aan ka helnay gorgortan iyo dhammaan la mid ah sida qeybtii qol ee Stockholm ku kacaysaa.
– Waxaan bilaabay dib u soo celinta ee dhismaha ugu weyn ee xagaaga iyo in sida ugu dhow 1870 - version qarnigii sida ugu macquulsan. Away la sibibixda albaabada muraayad, horumarinta pärlsponten hore ådringsmålade, la wallpaper muddo, out la alwaax jir ah, Horumarinta ee shooladaha iyo makiinadaha bir iwm. Qaar ka mid ah qolalka ahaayeen si buuxda u dhawrsan ka 1800.
– Waxaan la horumarinta hogaaminta shaqeeyaan maamulayaasha shirkadaha iyo ururada oo uu leeyahay fursad uu ku noqon in our beerta jir ah oo ku saabsan 40% waqtiga, sannadka oo dhan.
– Haddaba, waxaan xiriir fiican la leeyahay dadka tuulada. Waxaa jiray waayo-aragnimo ah oo dhammeystira in jawiga guud ee nabadda waqooyiga iyo wada noolaanshaha.
– Hadda waxaan si joogto ah kor ugu carabka ku Maareeyayaasha Stockholm ee siminaaro loogu talagalay qudhiisu helo iyo wada noolaanshaha iyo digtoonaan in uu maanta si badan loo baahan yahay.
– Waxaan si joogto ah waxaa laga helaa wax kasta oo aynu ayaa raadinaya iyo in ka badan, oo ay jeceshahay marka aan meel kale waa. Waxaan heysanaa cagaf ah oo halkaas innaba dhammaad ma male markuu u yimid si uu u sii abuurista xarunta. “Si aad u aragto inuu woodshed is-ku qanacsan iyo dareemayaa urta fiican ee geed iyo gran iyo bjørk waa beeyo ah naftiisa”.
Eva iyo Per Tärnfors